क’पाल झर्ने स’मस्याले हैरान हुनुहु’न्छ ? मात्र यी ४ उ’पायबाट पाउनुहो’स् छुटका’रा – रोचक ज्ञानविज्ञान
क’पाल झर्ने स’मस्याले हैरान हुनुहु’न्छ ? मात्र यी ४ उ’पायबाट पाउनुहो’स् छुटका’रा
अमलाको जुस: अमलामा ट्यानिन र क्या’ल्शियम जस्ता पदार्थ पाइन्छ । यो दुवै पदार्थ कपाल बढ्न मद्दतगार हुन्छ । र यो क’पालको लागि निकै लाभदायक हुन्छ । कपालको जरामा अमलाको रस लगाउनुस् र ३० मिनेटसम्म लगाउनुस् । यो प्रक्रिया हप्तामा दुईपटक लगाउनुस् । प्याजको रस: प्याजको रसले क’पालमा यसको वृद्धिका लागि अतिरिक्त सल्फर प्रदान गर्छ । जसले गर्दा कपाल झर्न रोक्ने काम गर्छ । आधा प्याजको रस निकाल्ने र कपालको जरामा लगाएको ३० देखि ६० मिनेटमा पखाल्ने गर्नुपर्छ । यो प्रक्रिया हप्तामा दुई पटक गर्दा क’पाल झर्ने स’मस्यामा कमि आउँछ ।
जवानीमै कपाल फुलेका कारण ल’ज्जित हुनुप’र्यो ? यसरी बनाउनुहो’स् प्राकृतिक रुपमै कालो कपा’ल: क’पाल मानिसको सौन्दर्यतासँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले मानिसको हेयर स्टाइलले पनि मानिसको सौन्दर्यमा निकै प्रभाव पार्दछ । तर समय नपुगि कपाल फुल्ने स’स्याबाट धेरैलाई सताएको हुन्छ । राति ढिलो समयसम्म नसुत्ने , खानपानमा ध्यान नदिने र धेरै तनाव लिने स’मस्याका कारण आजभोलि जवानीमै मानिसहरुको कपाल फुल्ने गरेको पाइन्छ । आज हामी कपाल फुल्ने समस्याबाट छुटकारा पाउने उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ ।
कपालका हाँ’गा फाट्ने स’मस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? उसो भए अपनाउनुहो’स् यी उपा’य: क’पाल फाट्ने स’मस्या कैयौँ महिलाले भोगिरहेका हुन्छन् । कतिपयले क’पाल फाट्नुलाई क’पालमा हाँगा पलाएका रूपमा पनि बुझ्छन् । तर, कपालमा अर्को हाँगा पलाउने होइन कि एउटा क’पाल च्यातिएर दुईरतीनवटा बन्नु हो । चिल्लो र मुलायम क’पालमा हाँगा फाट्ने स’मस्या दुर्लभ हुन्छ । यस्तो स’मस्या सुक्खा कपालमै देखिने गर्छ । धेरै नै सुक्खा भएपछि क’पाल चिरिन थाल्छ । क’पाल फटाउन भूमिका खेल्ने सुक्खापनका धेरै कारण छन् ।
फाट्ने कारण: क’पालमा बढी तापक्रम पर्दा सुक्खा हुने तथा फाट्ने स’मस्या देखिन्छ । तर, क’पाल तात्ने विभिन्न कारण हुन्छन् । हेयर स्टाइल गर्ने इलेक्ट्रिक सामानको बढी प्रयोग, घाममा धेरैबेर रहनु, नुहाउँदा तातोपानीको प्रयोग गर्नुजस्ता कारणले क’पालमा बढी ताप पर्छ र फाट्न थाल्छ । प्रदूषण र धुलोमैलोका कारण कपाल निकै सुक्खा हुन्छ। क’पाल सफा नहुँदा पनि फाट्छ । धेरै चिसो मौसममा क’पाल खुला राख्दा पनि सुक्खा भएर फाट्ने गर्छ । क’पाल सफा राख्नु त पर्छ, तर सफा गर्ने नाममा हरेक दिन स्याम्पु गर्नु गलत हुन्छ । हरेक दिन स्याम्पु गर्ने कपाल धेरै फाट्छ । किनभने, स्या’म्पुमा केमिकल हुन्छ । यस्तै स्विमिङ पुलमा धेरै जानेको पनि हाँगा फाट्ने खतरा बढी हुन्छ । स्विमिङ पुलको क्लोरिनयुक्त कडा पानीले कपाल सुक्खा बनाउँछ । धेरै कपाल रंग्याउँदा पनि फाट्ने स’मस्या निम्तिन्छ । हेयर कलरिङ र पर्म गर्ने पनि नियम र मापदण्ड हुन्छ । छिटो–छिटो कलरिङ गर्दा र फरक-फरक कलर फेरिरहँदा अत्यधिक केमिकलका कारण कपाल रुखो हुने तथा फाट्ने गर्छ । नियमित कपाल काट्ने तथा ट्रिम गर्ने बानी नहुनेको कपाल पनि फाट्ने गर्छ । सधैँ उही अवस्थामा छोड्दा कपाल सिमित अवधिपछि सुस्त गतिमा बढ्ने, अस्वस्थ हुने र फुस्रो हुने हुन्छ । कपालमा नियमित तेल नलगाउँदा पनि सुक्खा भएर फाट्छ । नुहाउनुअघि तेल लगाउन आवश्यक हुन्छ । त्यसो त नुहाएपछि चिसै कपालमा मसिनो दाँत भएको काइयो लगाउँदा पनि नकारात्मक अ’सर देखाउँछ । सस्तो ब्यान्ड–क्लिप प्रयोगले पनि कपाल फटाउन भूमिका खेल्छ । यस्तै, हेयर कस्मेटिक र जेलको अत्यधिक प्रयोगले पनि यो स’मस्या ल्याउँछ ।
फाट्न नदिन: कपाल फाट्ने स’मस्याबाट जोगिन फाट्ने कारणबारे सचेत रहनुपर्छ । यसको मतलब घाममै नहिँड्ने, कलरिङ नै नगर्ने भन्ने होइन । यी काम गर्दा अ’सर कम हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । प्रदूषण र घाममा हिँड्दा कपाल छोपेर असरबाट बच्न सकिन्छ । उही कपालमा पटक(पटक कलरिङ गर्नुहुँदैन । एकपटक कलरिङ गरेको कपाल ट्रिम गर्दै जाँदा सकिएपछि नयाँ भर्जिन कपालमा कलरिङ गर्नुपर्छ। कलरिङ गरेपछि हेयर ट्रिटमेन्ट र आयल मसाज गरिरहनुपर्छ । महिनामा दुईपटक ट्रिटमेन्ट आवश्यक पर्छ । हेयर स्पा सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। स्पामा हेयर ट्रिटमेन्टको प्याकेज नै हुन्छ । चिसो कपाल कोर्दा मोटो दाँत भएको काइयो प्रयोग गर्नुपर्छ। कमसेकम दुई महिनामा हेयर कटिङ या ट्रिमिङ गर्नुपर्छ । हरेक हप्ता आयल मसाज गर्नुपर्छ ।
फाटेको भए घरमै उपचार: फाटेको क’पाललाई फेरि जोड्न सकिँदैन । तर, च्यातिएर फिँजारिँदा नराम्रो देखिएको कपाललाई घरमै प्याक प्रयोग गरेर मुलायम बनाउन सकिन्छ। फाटेको कपाल त बिस्तारै ट्रिम गर्दै गएर हटाउने हो । अनि नयाँ कपाल फाट्न नदिन सजग रहने हो । फाटेको कपालका लागि स्याम्पुमा अन्डा र पानी मिसाएर बनाएको प्याक ३०/४५ मिनेटसम्म कपालमा लगाएर त्यसपछि सादा पानीले पखाल्न सकिन्छ । यो उपाय हप्तामा एकपटक अपनाउँदा केही हप्तामै सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ । सुन्तलाको रसमा केरा र अन्डा मिसाएर बनाएको प्याक पनि फाटेको कपालका लागि उपयोगी हुन्छ । यो प्याक पनि हरेक हप्ता ३०–४५ मिनेट कपालमा राखेर सादा पानीले पखाल्न सकिन्छ । दही र पाकेको मेवा बराबर मात्रामा मिसाएर बनाएको प्याक लगाउँदा पनि कपाल नरम र मुलायम हुन्छ । फाटेको कपाललाई व्यवस्थित गर्न यो प्याक उपयोगी हुन्छ । क्यास्टर आयलमा ओलिभ आयल या तोरीको तेल मिसाएर हरेक हप्ता मसाज गर्ने र आधा घन्टापछि स्याम्पुले पखाल्ने गर्दा पनि फुस्रो कपाल मुलायम बन्छ कपालका लागि बियर पनि निकै उपयोगी हुन्छ। फाटेको कपाल बियरले भिजाएर आधा घन्टापछि सादा पानीले पखाल्ने गर्दा राहत मिल्छ। सामान्य कपालमा पनि बियर प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।